တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင် ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်၌ မေးမြန်း – Eleven Media Group - Open Hluttaw
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင် ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်၌ မေးမြန်း – Eleven Media Group
Posted on ဩဂုတ် 30, 2018 မတ် 1, 2019 by zinmyohtetaung
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင်ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်း တို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိမရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နေပြည်တော်၌ သြဂုတ် ၂၉…
Source: တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြား၍ အစိုးရပိုင် ကျောင်းအဆောက်အအုံ၌ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပါတီအလံစိုက်ထူခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ထားခြင်းတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်တော်၌ မေးမြန်း – Eleven Media Group
This entry was posted in အထွေထွေ, လွှတ်တော်သတင်းများ, ပြည်သူ့လွှတ်တော်. Bookmark the permalink.
← ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းတွင် စီးကရက်၊ ဆေးပေါ့လိပ်နှင့် အရက်အမျိုးမျိုးအတွက် အခွန်နှုန်းထားများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံထား – Eleven Media Group
အစိုးရတောင်းခံသည့် အသုံးစရိတ်ထဲမှ ကျပ်ဘီလီယံ ၂၀၀ ကျော်ဖြတ်တောက်ရန် တင်ပြ | DVB →